နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို | Myanmar President Office
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို
Submitted by cwmpo2 on Thu, 08/24/2017 - 17:04
နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၂၄
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၌ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို သည်။
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးသည် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်သို့ ရောက်ရှိလာရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ရင်းရင်းနှီးနှီး ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့်တို့ သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြကာ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးကြပြီး ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အပြန်အလှန် မိတ်ဆက် ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၏ ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာငုယင်ဖူးကျောင့်တို့ သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြ သည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံပါတီအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ အစိုးရအချင်းချင်းနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား ဆက်ဆံရေးအပါအဝင် ကဏ္ဍစုံ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမို မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသို့ တိုးမြှင့်တည်ထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့် တို့ဦးဆောင်သည့် နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို ဆက်လက်ကျင်းပသည်။
နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ၊ ကာကွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာများတွင် နှစ်နိုင် ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေး နွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးအုန်းမောင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဧည့်သည်တော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့် ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ် ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong လည်း တက်ရောက်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်း အနားကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ် လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုရင်ဖူးကျောင့်တို့ရှေ့မှောက်၌ (၂၀၁၇-၂၀၂၀) ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်ကို သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုနှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး H.E. Mr.Nguyen Ngoc Thien တို့ကလည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်နှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr.Tran Tuan Anh တို့ကလည်းကောင်း၊ ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းနှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Bui Van Ga တို့ကလည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြန်အလှန်အကူအညီပေးမှုဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်ကို ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်းနှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Tran Van Hieu တို့ကလည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အပြန်အလှန်လဲ လှယ်ကြသည်။
နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအပြီးတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲ ရှင်းလင်းပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးအပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြားနှင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါကြောင်း။
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့်၏ အလည်အပတ်ခရီးသည် မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် ဆက်ဆံရေးသမိုင်းတွင် စာမျက်နှာသစ် တစ်ရပ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပါအဝင် မိမိတို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး အပေါ် ပိုမိုအလေးထားလျက်ရှိရာ လာမည့်အနာဂတ်တွင် လည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေများ အဖြစ် မိမိတို့၏ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ရန် မိမိတို့ အလေးအနက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့်က မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်ပါကြောင်း၊ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုမှ တစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများမှ အကျိုး ကျေးဇူးများရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ထိုသို့ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် နားလည်မှုစာချွန်များကိုလည်း ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပေးခဲ့သည့် အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာများရှင်းလင်း တင်ပြသည့် အခမ်းအနားကျင်းပ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၀န်ကြီးချုပ် ရှရီနာရန်ဒရာမိုဒီအား ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဖြင့်ကြိုဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၀န်ကြီးချုပ် ရှရီ နာရန်ဒရာ မိုဒီအား ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့၀င်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၏ စတုတ္ထအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများ ညီလာခံဖွင့် ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Mr.Wang Qin Minအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mrs. Carrie Lam ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ (၇၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ
အမျိုးသားအဆင့်ရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ တတိယအကြိမ် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ညှိနှိုင်းအစည်အဝေးကျင်းပ